5 zvitsva zvekuwa. Auster, Posteguillo, Marías, Follett uye Skal | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Noticias, dzakawanda
Nyamavhuvhu yatanga nenzira hombe mukati nhau dzekunyora. Anotarisirwa mazita evanyori vakakosha anozadza masherufu kugadzirira a matsutso anonyanya kufadza. Mwedzi mishoma yapfuura ndakatofambira mberi zvimwe zveizvi zvitsva mumhando nhema. Nhasi ndidzo idzi dziri kuunzwa izvozvi kana dzichazviita munguva pfupi. Iwo matsva e Auster, Marías, Posteguillo, Follett uye Skal. Zvakasiyana kwazvo uye zvese zvinonakidza.
3 Denderedzwa rechinomwe regehena - Santiago Posteguillo
4 Shongwe yeMoto - Ken Follett
5 Chinhu chiri muRopa: Chakavanzika Biography yaBram Stoker - David J. Skal
Munyori ane mukurumbira wekuAmerica anga achingova pano kuzopa iyi nyowani nyowani. Yatove muzvitoro zvemabhuku kubvira kare August 29. Iyo inotsigirwa ne wongororo dzakanakisa kuchikwanisa kunge chakanakisa kunyora munyori weNew Jersey Aya ndiwo maratidzirwo aanozviita, uyo anga asina kuburitsa chero chinhu kwemakore manomwe.
Auster inotaura nyaya ye Archibald ferguson uye kuvapo kwayo kwe hupenyu huna hwakafanana asi zvakasiyana zvachose. Izvi zvinorevawo nzira ina dzakasiyana dzekutsvaga rudo, hushamwari, mhuri, hunyanzvi uye kunyangwe rufu. All naye mari yeimwe yeiyo zviitiko zvakakosha zvikuru muUnited States yehafu yepiri yezana ramakumi maviri.
Bertha Island - Javier Marías
Mudzidzi Javier Marías anotora iyo mutauro zvakajairika pabasa rake kujekesa iyo yerudo nyaya yaBerta Isla naTomás Nevinson. Pavaive vadiki kwazvo, ivo vaviri vakasangana muMadrid uye pakarepo vakasarudza kugara pamwe chete. Asi ivo havafungira kuti a kugarisana kwekusavapo uye kutsakatika. Zvese zvechisarudzo chakaitwa rimwe zuva mushure mekunge Korona yatora kufarira Tomás. Hafu yeSpanish nehafu Chirungu, ane chipo chemitauro uye maaccents uye izvi zvinomuendesa kunodzidza kuOxford.
Denderedzwa rechinomwe regehena - Santiago Posteguillo
Mumazuva matanhatu Iri basa nyowani riri kubuda, rakapfupika kune izvo zvatakajaira isu, nemunyori akakurumbira weValencian, munyori weanozivikanwa Nhoroondo trilogies yeScipio naTrajan. Kune mazana maviri nemakumi mashanu emapeji e Ensayo uko Posteguillo inotora nhoroondo yezvinyorwa kuburikidza nemusoro wenyaya we Vakatukwa vanyori, vanyori vakanganwa.
Zvakare Posteguillo anotitapukira rudo rwake rwemabhuku nevanyori kuti, mune iri zita, kuyambuka gehena pachako kana kuti vanovakomberedza nemabasa matsva uye akasimba anovapfuura. Pakati peaya mahero uye neavo vanomiririra, semuenzaniso, iyo KGB, the Nazism, Bvunzurudzo, hondo, FBI, nzarala kurasikirwa, chirwere, chirwere kutapwa kana kudzvinyirira.
Pakati pevanyori mahero ake aive, semuenzaniso, kufa kwemwanasikana wake Josephine kusvika Rudyar kipling izvo zvaireva basa rakakosha uye richizivikanwa se Bhuku resango. Asi ivo vari mimwe mimwe sampuli nemazita izvo zvakakosha kuti uzive uye kuyemura.
Mbiru yemoto - Ken Follett
Tevere zuva 12 iyo yekupedzisira yakamirirwa yekupedzisira zita re imwe yemasaga ane mukurumbira yezvinyorwa zvemazuva ano. Mbiru yemoto inoisa yekupedzisira poindi kune iyo inonyanyo kuzivikanwa nhoroondo trilogy wemunyori weWales, nemvumo yake Century trilogy.
Panofanira kuve nevanoverengeka vashoma munyika vatove vasina kuverenga Mbiru dzenyika o Nyika isingaperi, kutanga kwekutanga kupfuura wechipiri zvirokwazvo. Saka mamirioni anoverengera kuverengera zvemunyori ane mukurumbira uye anodarika anotengesa zvakanyanya achamhanyirawo magumo aya.
Tiri kuenda zana ramakore XVI, kusvika 1558, uko manheru eKisimusi jaya iri Ned willard anodzokera kumba mu Kuchengetwa. Asi gore 1558 zvichave kusarudza nekuti mambokadzi achakwira pachigaro Elizabeth I, nezvose izvo zvazvichareva kunhoroondo yeEngland neEurope zvakazara.
Chinhu chiri muropa: Iyo Yakavanzika Biography yeBram Stoker - David J Skal
Uye muna Gumiguru tine zita iri vanhu vanofarira munyori weIrish Bram Stoker. Imwe biography, Zvikuru zvakawanda kufambidzana, yakasainwa ne North America munyori David J Skal. Chidzidzo zvakare pane inopfuura kunetsekana kuguma kwenguva yeVictorian. Skal akashandisa achangowanikwa magwaro senge tsamba, diaries uye nyaya isina kuburitswa naStoker kunyora zvakadzama mufananidzo wepfungwa kubva kumusiki weDracula.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » 5 zvitsva zvekuwa. Auster, Posteguillo, Marías, Follett uye Skal
Plinio, naFrancisco García Pavón, mupurisa akanakisa muLa Mancha.
Mabhuku manomwe ekuramba uchiverenga paunodzokera kuchikoro